Fanampiana marika: ny fanjakan'ny marika | Martech Zone
Zoma, Desambra 29, 2006 Alatsinainy, May 18, 2015 Douglas Karr
Sendra zava-nitranga mahafinaritra aho lahatsoratra anio hariva momba ny State of Branding. Tsy miombon-kevitra mihitsy amin'ny mpanoratra aho, Brad VanAuken, fa te hanampy teboka vitsivitsy aho. Roa taona lasa izay izay niasako ara-dalàna ho an'ny mpitantana marika hafa, saingy tiako ny hanao teboka manan-danja iray izay mety ho miharihary nefa ilaina izany.
Nandritra ny indostrian'ny gazety nandritra ny folo taona lasa, hitako ny fihenan'ny fitomboan'ny fahafaha-mifehy na mitantana ny marika. Raha ny fahitana azy dia mbola tsotra ihany… ny loko, ny logo ary ny vokatra dia tsy niova. Na izany aza, ny marika nanao. Ny marika niova avy any ivelany mankany.
Ny hafatra sy ny fomba fijerinay dia tsy niova. Na izany aza, ny antonony tamin'ny alalany no nandraisan'ny olona ny marika niova avy amintsika ho amin'ny olona, ​​tamin'ny alàlan'ny Internet, tamin'ny alàlan'ny olona nandefa anay, tamin'ny alàlan'ny olona mpanjifa anay, tamin'ny alàlan'ny mpanjifanay, tamin'ny alàlan'ny fifaninanana an-tserasera, sns.
Orinasa toy ny mahazatra io. Samy nanofahofa tanana sy nitsiky izahay ary nanondro ny rantsan-tananay rehefa nilaza sy nanao zavatra nanimba anay ireo mpampita vaovao ireo, ary tsy nanao na inona na inona izahay. Vokatr'izany dia nanomboka tsy nahomby ny marika - ary mbola tsy mahomby izy ireo. Nahita azy aho, nikiakiaka aho, ary naseho ahy ny fivoahana (soa ihany).
Indraindray dia tsy dia haingana loatra amin'ny indostria hafa izy io, fa hitantsika hatraiza hatraiza io tetezamita io. Ny olana dia ny ataon'ny mpitantana ny marikao sa tsia. Ahoana ny fomba ampitan'ny mpitantana ny marika am-pahombiazana ny hafatra inona no ezahin'ny orinasanao ampitaina amin'ny mpanjifany amin'ny alàlan'ireo fitaovana vaovao ireo? Fantatry ny mpiasanao rehetra ve ankehitriny fa izy ireo no mitantana ny marika? Tompon'andraikitra amin'izany ve izy ireo? Ahoana ny fomba fampiofanana azy ireo hiatrehana izany? Inona no lazain'ny bilaogin'izy ireo momba ny marikao?
Izao dia avo noho ny mpitantana ny marikao ny kalitaon'ny orinasa ihany. Mino aho fa manao zavatra tsara Andriamatoa VanAuken amin'ny fanazavana an'io. Safidy ny fanamafisana ny olana. Ny mpanjifa dia iharan'ny safidy vaovao raha vao mandre ny vaovao ratsy momba ny marikao. Amin'ny tranga mazava, ny alina hafa I namoaka about Swapagift.com. Taorian'ny fandefasana azy dia sendra forum iray aho izay miresaka momba ny serivisy ary nahita serivisy iray hafa resahina amin'ny hazavana tsara kokoa… CardAvenue. Tao anatin'ny minitra vitsy dia nahita vokatra tsara (TSY amin'ny alàlan'ny marketing) ary nahita mpamatsy hafa an'io vokatra io (TSY amin'ny alàlan'ny marketing).
Mahagaga fa haingana be ny vaovao mandeha ary hitsangana ny fifaninanana. Mihoatra noho ny taloha, ny Brand Manager anao dia mila miezaka mafy mifampiresaka ao anaty toy ny ataony ivelany. Izy ireo dia mila ny ho evanjelista sy mpanazatra ny mpiasa rehetra ao aminao. Ny serivisinao, ny vokatrao, ary indrindra indrindra, ny olonao no mpanelanelana lehibe indrindra hampitana ny marikao. Manao ahoana izy ireo?
Tags: marikapaikady marikafanjakana marika
Dec 29, 2006 amin'ny 11: 35 AM
Mahatsiaro tena ho sambatra aho, amin'ny maha-mpandraharaha vao manomboka, nianatra momba ny tambajotra sosialy sy ny marika manokana hatramin'ny voalohany. Ao amin'ny lahatsoratra noresahinao, ny mpanoratra dia nanantitrantitra ireto hevitra ireto: "fahaizana, fahafahana miditra, lanjany, fahasamihafana mifandraika ary fifandraisana ara-pihetseham-po." Miezaka ny hahatratra ireo teboka ireo aho rehefa mihalehibe. Ny tena ifantohanako izao dia manome lanja maimaim-poana, hanorina ny maha-azo itokiana. Ambonin'izany, tsy voafehin'ny birao mibontsina aho. BTW, manao tsara aho!
Vince, prop., mpivarotra eBay, fomba fanoratana.